imobile iqx ကိုအလွယ်ဘဲ root ကြမယ်ဗျာ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
imobile iqx ကိုအလွယ်ဘဲ root ကြမယ်ဗျာ
Posted on August 2, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ C box မှာလာအော်သွားတဲ့ ကိုရင်ငြိမ်းအတွက်ပါ။တစ်ခြားသူတွေလည်းနမူနာယူပြီးကလိလို့ ရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်ေိေိ။
imobile iqx ကို root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ မိမိတို့ဖုန်းမှာ usb debugging လုပ်ပေးရပါမယ်။ application > setting > development >ကိုသွားပြီး usb debbuging ကိုအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။အသေးစိတ်ကိုဒီမှာ ဝင်ကြည့် လည်းရပါတယ်။
အဆင့်(၁) ကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်တဲ့usb driver ကို ဒီမှာ ဝင်ယူပေးပါ။ပြီးရင်ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပေးပါ။ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို run as administrator နဲ့run လိုက်ပါ။ ခဏစောင့် ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကသိပြီလားဆိုတာစစ်ပေးပါ ။အဆင်မပြေရင် computer > manage > device manger >ကနေ အဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့usb driver ကိုကလစ်ပြီး uninstall လုပ်ပါပြီရင်။ action ကနေ update driver software ကိုကလစ်ပြီး browse my computer ကနေ usb driver ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးပြပေးလိုက်ပါ။အဆင်ပြေရင်ဒီလိုပုံလေးနဲ့ နော်။
အဆင့် (၂) လိုအပ်တဲ့root ဖိုင်းကိုဒီမှာ ယူလှိုက်ပါ။ကဲလုပ်ငန်းစကြမယ်နော်။ေိေိ
အဆင့် (၃) ဒေါင်းလုပ်ရယူခဲ့ တဲ့ဖိုင်ကို zip ဖြေပြီးရင် run ဖိုင်ကို run as administrator နဲ့run လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ usb တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရင်လို့ အိုကေရင် အောက်ကဒီလိုပုံလေးပေါ်လာလိမ့် ပါမယ်။အဲဒီမှာ enter ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့ ကီးကိုနိပ်လို့ ရပါတယ်။
အဆင့် (၄) အမည်းရောင် cmd အကွက်ဟာ သူ့ ဘာသာအလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်သွားပါမယ်ေိေိ။နောက်ထပ်တစ်ခါ enter ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့ ကီးကို နိုပ်ဖို့ တောင်းလာရင်နိုပ်ပေးပါ။
အဆင့် (၅) ခဏစောင့် ပေးပါ။ auto reebot ပြန်လုပ်ပေးပြီးသွားရင် superuser app ရောက်နေတာကိုတွေ့ ရပြီး root လုပ်တာပြီးမြောက်သွားပါပြီ။ေိေိလန်းတယ်နော်။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ ဖုန်းအခက်အခဲများကို saithu102@gmail.com / saithu777fcebook.com/saithu102.blogspot.comသို့ ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
This entry was posted in imobile root လုပ်နည်းများ. Bookmark the permalink.
← Facebookအသုံးပြုနည်းစာအုပ်	ဘလော့ကာများအတွက် အထူး သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ →
2 thoughts on “imobile iqx ကိုအလွယ်ဘဲ root ကြမယ်ဗျာ”	what this says:	October 6, 2013 at 3:04 pm	iqx က imobile logo က မတက်လို့ ပြောပေးပါဦး .. help me !
Reply	what this says:	October 6, 2013 at 3:04 pm	iqx က imobile logo က မတက်လို့ ပြောပေးပါဦး .. help me !